Kolombia : Mihorohoro Indray ny ao Medellín · Global Voices teny Malagasy
Kolombia : Mihorohoro Indray ny ao Medellín
Voadika ny 23 Mey 2018 8:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Português, English
Poleta sary an'i mattborowick
Andro vitsy lasa izay, noresahantsika ny fiverenan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny fameperana ny fivezivezen'ny lehilahy mitaingina moto, fepetra noraisin'ny governemanta mba hamerenana ny fandriampahalemana ao Medellín, saingy ankehitriny, ireo mamafy trakta tsy mitononana anarana ary manatsofoka azy ireny eny ambany varavarana sy miampitampita tànana milaza fa tsy misy olona tokony hivoaka eny an'arabe aorian'ny amin'ny 9 na 10 ora alina indray izao no mamafy tahotra ao an-tanàna, any amin'ny sasany amin'ireo faritra ao an-tanàna, mba hanadiovana azy amin'ireo mponina tsy lanin'ny vavoniny.
Nisy akony tao amin'ny Twitter izany rehetra izany, tany amin'ny bilaogy maro, ary tao amin'ny rojom-panehoana hevitra tamin'ny lahatsoratra am-bilaogin'i Juan David Escobar, Arahaba indray tongasoa eto amin'ny tanànan'ny horohoro [esp], izay notanisainay tamin'ny herinandro lasa. Isan'ny tao anatin'ireny fanehoankevitra ireny ny an'i Programator, izay manoratra hoe :
Nisy nanoratra teo amin'ny tranon'ny namako iray hoe : “Ampatorio ny ankizy, raha tsy izany dia izahay no hampatory azy ireo”, tsy fivezivezena amin'ny alina, 10 ora alina, [vohitra] Robledo Kennedy. Mampihomehy satria toy ny tsy mikisaka ny fotoana, ary satria toejavatra mitovy no atrehantsika indray, toedraharaha toy ny hatrizay, ny tsy fandriampahalemana ary ny loza eny an'arabe. Matetika mandalo eo anoloan'ny tranoko ny polisy manenjika ireo traquetos [irakiraka mampifandray ireo mpamboly sy mpanaparitaka zava-mahadomelina] mitaingina moto, indray andro aho voatery niafina tany an-tranon'ny mpifanolo-bodirindrina amiko raha iny tonga avy niasa iny satria “Aty ry zareo, avia, avia mandra-pahavitan'io dia mijanona eto”. Ary dia mampahatahotra ireo teny ireo. Ary ambonin'izay raha toa ka eo akaikin'ny tranonao no miseho ny tantara.
Solo para mujeres mitatitra ao amin'ny bilaoginy ny resaka iray [esp] izay azo heverina ho nitranga tao an-tanàna :
* Henoy, tonga tao amiko ny taratasy iray milaza hoe tsy tokony ho eny an'arabe intsony aorian'ny amin'ny 9 ora alina satria tsy misy miantoka ny ainao.
- Faran'izay mampivarahontsana izany !!!… saingy fantatro fa tsy azo atao ny mivoaka mitondra moto.
* Tsia, tsia ry tsy foiko, an'i Salazar io lazainao io fa ilay lazaiko anao, tsy misy mahalala hoe an'iza ilay izy, be loatra ny olona mandefa fandraràna.
Nohamaivanin'ireo manampahefana ny lanjan'ireny fandrahonana ireny, hoy ny gazety El Mundo [esp], tamin'ny fanamafisana fa ireny vondrona ireny dia mitady ny hampitahotra ary izay mitranga ankehitriny dia ady ho amin'ny fifehezana faritra. Antenain'izy ireo fa hanampy hanamaivana ny fihenjanana ny fahatongavan'ireo mpitandro filaminana fanampiny ho ao Medellín mandritra ny fivorian'ny Banky Iraisan'ny ao Amerika ho an'ny Fampandrosoana, ny 27 hatramin'ny 31 martsa 2009.
Momba io fivoriana io, soratan'ny El Inspector [esp] hoe hatraiza no ilàna manolotra tanàna iray maoderina, tsara rindra sy milamina ho an'ireo mpikambana ao anatin'ilay Banky:
Andraikitsika ny manolotra sary mendrika ho an'ireo vahiny manankaja mitsidika antsika, ho soa ho an'i Kôlômbia. Saingy ireo mponina ao Medellín sy ry zareo paisas [ang] amin'ny ankapobeny dia mbola manana adidy bebe kokoa amin'ny fanekena am-pahasahiana hoe misy fahatsapana mihamitombo momba ny tsy fisian'ny fandriampahalemana sy ny rà mandriaka.
Tsy misy tokony hanafenana ny isan'ny heloka bevava sy hisorohana ny adihevitra momba ny filaminana. Tongasoa ianareo mpikambana ao amin'ny Banky Iraisan'ny ao Amerika ho an'ny Fampandrosoana, fa tongasoa ihany koa ny fahitsiana.
Ao amin'ny tranonkalan'ny radio LaFm [esp], resahana ihany koa ny momba ireo taratasy kely naparitaka tao afovoan-tanàna, mitovy ihany, ireo manampahefana izay manohy ny misisika mafy mangataka amin'ny olona mba tsy ho be fanahiana. Saingy eny an'arabe, zavatra hafa mihitsy no mitranga.
Angelfire nandefa ity bitsika ity [esp] :
Tengo muchisimas ganas de una cerveza hoy, pero pongo un pie en la calle y me dejan como un colador a punta de bala <_> 🙁
Tena te-hisotro labiera aho anio hariva, saingy raha vao mandia any ivelany any ny tongotro, havadikin'ny balan'izy ireo ho lasa fanatantavànana aho <_> 🙁
Any anaty bitsika hafa, manamafy izy hoe nisy taratasy kely notsinjaraina, ary nisy 20 maty tao anatin'ny 15 andro [esp] ary izy mihitsy aza no vavolombelona nahita fifampitifirana [esp], nisy ireo bala nipitika teny an-davarangana iray.
Araka izany, inona no zava-mitranga ? Mandefa petrakevitra iray [esp] ny Institut Populaire de Formation, taorian'ireo taona marobe niasàna tany amin'ireo faritra natao an-jorom-bàla :
“Raha mbola nisy ny atao hoe ‘patirao’ ao an-tanàna, olona iray ifampiraharahàna, nidina ny tahan'ny heloka bevava, saingy ankehitriny tsy misy intsony, dia mitombo ilay izy. Ny zava-misakana dia eo anelanelan'ny fanaovana fifampiraharahàna amin'ny mpisehatra iray vaovao manjakazaka, na manamafy ny fitsaràna hanoherana ny heloka bevava”, hoy i Balbín.
Ao amin'ny Twitter, manana fijery hafa mihitsy ireo mponina ao Medellín : ny iray mihevitra [eso] fa ny fandinihana ireny fandrahonana ireny dia manome vàhana ireo mpanao heloka bevava sy filavoana lefona amin'ny horohoro, ny iray hafa mihevitra fa olana iray efa mahazatra fotsiny io [esp] ary hovitan'ireo manampahefana ny hamàha azy [esp], dia manantena fa tsy hanaisotra izay efa vita nandritra ny 10 taona izy ireo [amin'ny resaka fampandriana fahalemana], ary ny hafa, somary matromatroka kokoa, mihevitra fa izay mitranga ankehitriny dia tafiditra ao anatinà zotra izay fanadiovana ny tanàna [esp] ho an'ny fiavian'ireo mpikambana ao amin'ny Banky Iraisan'ny ao Amerika ho an'ny Fampandrosoana, na manamarika sahoan-dresaka milaza fisiana rohy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo vondrona mitàm-piadiana ivelan'ny tafika.
Dia inona izany no azon'ny vahoaka atao ? Ny sasany efa miteny sahady fanangonana ireo vaovao sy fijoroana vavolombelona, hamaritra ny toerana nisy azy ireny ho eo ambony sarintany, mba hahafahan'ny olona mijery izay tanàna tena voarahona kokoa, ny karazana taratasy samihafa mandehandeha, ary ny toerana nisy tranga feno herisetra.